စတိုင်လ်ဝတ်နည်း - Men's Fashion | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 15/11/2021 21:01 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ပုံ, သဘောထားတွေ
'စတိုင်လ်ကျကျ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း' သည် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် ကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည် ကွဲပြားပြီး ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ်ပေးသူ တစ်ဦးထံမှ မွေးဖွားလာသော်လည်း၊ နုံအသော. မှန်ကန်သည်ဖြစ်စေ မမှန်ကန်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံရှိရန် သေချာပေါက်သဘောတူကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံနဲ့ စတိုင်လ်ကျကျ ၀တ်စားခြင်းမပြုမီ အကြံပြုချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ မပျောက်သင့်ပါ။ မှန်ကန်စေရန်။ ကြာသည် အသိစိတ်နဲ့လုပ်ပါ သင့်တွင်ရှိသော အရာအားလုံးကို အသုံးပြုပါ၊ စတိုင်တစ်ခုဖန်တီးကာ သီးခြားဒြပ်စင်အချို့ကို အမြဲထည့်ပါ။
1 စတိုင်လ်ဖြင့် ၀တ်ဆင်ရန် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
2 စတိုင်လ်ကျကျ ဝတ်ဆင်နည်းများ
3 ငယ်ရွယ်ပြီး စတိုင်ကျသော ၀တ်စုံ
3.1 မြို့ပြ၊ ရေလွှာလျှောစီးသူ သို့မဟုတ် စကိတ်စီးပုံစံ
3.2 Bohemian ပုံစံ
စတိုင်လ်ဖြင့် ၀တ်ဆင်ရန် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
အားလုံးအသေးစိတ်အချက်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းသည် အဝတ်အစားသာမက ဖြစ်ခြင်း၊ မင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အရာအားလုံးကို ဆောင်ထားပါ။ ကာရိုက်တာနဲ့လုပ်တယ်။ သင်၏အသွင်အပြင်သည် အရေးကြီးသည်- အကယ်၍ သင်သည် လစ်ဘရယ်ဆန်သူဖြစ်ပါက သင်သည် မှန်ကန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သည်ဟု ခံစားရသည်။ စတိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ အမှတ်အသားပြုပါလိမ့်မယ်။
စကားမဟုတ်သော ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းသည်လည်း ကွဲပြားခြားနားမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဖြစ်ရမယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အနံ့အသက်ကောင်းဖို့၊ ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ နွမ်းလွန်းသောအဝတ်ကို မဝတ်နှင့်။ သင်၏စကားပြောနည်းသည်ပင် အသေးစိတ်ကျပြီး ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် အဓိကအချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်များအားလုံးကို သင်အောင်မြင်လိုပါက ၎င်းကို မလိုအပ်ဘဲ ပြုလုပ်ရန်ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ သတိရှိရှိခံစားပါ။
စတိုင်လ်ကျကျ ဝတ်တာက လူကြီးလူကောင်းလား ဒါမှမဟုတ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဝတ်တာလား။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဒီပုံစံကို ဖန်တီးဖို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြော့ရှင်းခြင်းသည် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦး၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို အမှတ်အသားပြုသည်။, နှင့်ပိုင်ထိုက်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှု၏နည်းလမ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ရခြင်းသည် သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော်လည်း၊ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏တန်ဖိုးများကိုတည်ဆောက်ပါ။. ၎င်းကို စတိုင်လ်ရှိသူအဖြစ်လည်း ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံနည်းလမ်း မဟုတ်ပေ။
စတိုင်လ်ကျကျ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ လူတစ်ဦးစီ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ထင်ရှားစေသည်။ လူတစ်ယောက်စီမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပုံနဲ့ တွဲလုပ်ရင်၊ ကြီးမြတ်သောအမြစ်များနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖန်တီး. ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံများသည် မြို့ပြအများစုမှ ဂန္ထဝင်အရှိဆုံး သို့မဟုတ် အားကစားဆန်သောအထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ Rock၊ Punk၊ Hippie၊ Gothic ကဲ့သို့သော ရိုးရာစတိုင်များ ရှိပြီး အစွန်းထွက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း ပင်ကိုယ်စရိုက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ကောင်းဘွိုင်၊ အားကစား၊ မြို့ပြ၊ ဟစ်ဟော့ပ် သို့မဟုတ် ဂန္ထဝင်-အံဝင်ခွင်ကျ စတိုင်များ။ မင်းရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ အဆက်စပ်ဆုံးက ဘယ်ဟာလဲ။
ငယ်ရွယ်ပြီး စတိုင်ကျသော ၀တ်စုံ
ဒီလိုမျိုး လမ်းကြောင်းသစ်ပါ။ လူငယ်များ ဝတ်ဆင်နိုင်ရန် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။. စတိုင်လ်ကျကျလုပ်ဖို့အတွက် အသက်အရွယ်အလိုက် လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သိရန် ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ သင်တစ်ဦးကိုဖတ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးတွေ သင်လိုအပ်သောအဝတ်အစားများဝယ်ယူရာတွင် ထိုအမှားအယွင်းလေးများကို သင်မည်ကဲ့သို့ပြင်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါသည်။
မြို့ပြ၊ ရေလွှာလျှောစီးသူ သို့မဟုတ် စကိတ်စီးပုံစံ
၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် လူငယ်များတွင် အသုံးအများဆုံးစတိုင်များဖြစ်သည်။ မြို့ပြပုံစံကို လမ်းပေါ်ရှိအခိုက်အတန့်များနှင့် ပေါင်းသင်းလိုသော အဝတ်အစားများဖြင့် အုပ်စုဖွဲ့ထားသည်။ ရံဖန်ရံခါ။ ဤမျှခြေကိုဖန်တီးရန် သုတေသနများစွာလုပ်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း လူငယ်များသည် ၎င်းကို ပို၍ပို၍နှစ်သက်ကြသည်မှာ သေချာပါသည်။ အဝတ်အစား၏ရိုးရှင်း။
El စကိတ်စတိုင် ဘောင်းဘီရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည်၊ ဘောင်းဘီရှည် ဝတ်နည်းကို အမြဲအမှတ်အသားပြုထားပြီး၊ အဲဒါနဲ့ မတူဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့်၊ 70 ခုနှစ်တွင်'။ ဤဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံသည် မြို့ပြဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လည်း ထည့်သွင်းထားပြီး grunge နှင့် hipster စတိုင်တို့လည်း ၎င်းနှင့်အတူ လိုက်ပါလာပါသည်။
El surfer စတိုင် အဝတ်အစားတွေကို စတိုင်လ်ကျကျနဲ့ သွန်းလောင်းဖို့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသူတွေထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လန်းဆန်းမှုနှင့် သိမ်မွေ့မှုများစွာကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဝတ်သည့်အချိန်တွင်၊ နီရဲသော၊ အသားပေးထားသော manes နှင့် Hawaiian အဝတ်အစားဝတ်နည်းကို ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ အထူးသဖြင့် ကမ်းခြေအနီးရှိ မြို့များတွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ဖန်တီးသည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဝတ်အစားများလိုက်လျောညီထွေရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အမြဲတမ်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အေးချမ်းပြီး အပန်းဖြေနေထိုင်မှုပုံစံ. ၎င်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အဆင်တန်ဆာများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရောင်များနှင့် တန်ဆာဆင်ထားသည်။ လူမျိုးစု သို့မဟုတ် ဟစ်ပီများထံ ဆင်းသက်လာခြင်း. တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်တွေမှာ ဝတ်ရတာ ပိုကြိုက်ပေမယ့် နေ့တိုင်းဝတ်ရတာ ကောင်းပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကို ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ဖန်တီးရာမှာ ကူညီပေးမယ့် အကြံပြုချက်လေးတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ဖြစ်ရမယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ ဘယ်လိုအဝတ်အစား အမျိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ်ဆိုတာ သိဖို့ အကြံပြုလိုတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အဝတ်အစားတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စမ်းကြည့်ပါ။ ပုံစံတူတဲ့ ပုံစံကို ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုပုံစံနဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ, သင်သည်အလွန်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ပါနှင့် bohemian ကိုသင်နှစ်သက်သည်။
စဉ်းစားပါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အဝတ်အစားတွေဝယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါက မတူတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒါက နှစ်အတော်ကြာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အဝတ်အစားတွေကို အမြဲဂရုစိုက်ရမယ်။ အရမ်းပင်ပန်းပုံမပေါ်ဘူး။ အဝတ်အစားတွေကို ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ အရသာရှိရှိ ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက အရမ်းအရေးပါတာမို့ သူတို့ဟာ အရမ်းခေတ်စားနေရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » စတိုင်လ်ကျကျ ဘယ်လိုဝတ်ရမလဲ
အထဲမှာ ဝှေးစေ့က ဘယ်လိုလဲ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို WhatsApp ကိုချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။